Tag: ngwa ngwa ngwa | Martech Zone
Tag: ngwa ngwa ngwa ngwa
Kedu ihe bụ Augured Reality? Kedu otu esi etinye AR maka ụdị?
Sunday, June 3, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Site n'echiche nke onye na-ere ahịa, ekwenyere m n'ezie na eziokwu dịwanye elu nwere ikike karịa karịa nke eziokwu. Ọ bụ ezie na eziokwu dị adị ga-eme ka anyị nwee ahụmịhe zuru oke, eziokwu dịwanye elu ga-eme ka ya na ụwa anyị bi na ya ugbu a nwee mmekọrịta. Anyị ekerịtala tupu otu AR nwere ike isi metụta ahịa, mana ekwenyeghị m na anyị akọwachaala n'ụzọ zuru ezu. eziokwu na ihe atụ. Igodo nke ikike na ahịa bụ ọganihu nke ama